Holọ ọrụ na-ebugharị azụ azụ - China Backhoe Loader Manufacturers, Suppliers
Ihe eji arụ ọrụ na teknụzụ dị elu ejiri na WIK388T backhoe Loader
WIK 388 Ihe nkwụnye azụ na-ejikọta igwe abụọ nke excavator na loader. Ọ nwere ọrụ niile nke excavator na loader. Otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ, adaba na mgbanwe, ma belata nzụta ego na ojiji nke igwe niile. Nhọrọ Deutz, Cummins na ndị ọzọ a ma ama na engines na Italian Carraro nnyefe usoro. Enwere ike ịkwadebe ya dị iche iche ngwaọrụ injinia dị ka onye na-emebi emebi, ihe nkedo arịlịka ala, igwe na-ama jijiji, wdg.
ọ isi bughi atụmatụ na elu uzu ojiji na WIK30-25 Backhoe Loader
WIK Ihe nkwụghachi azụ na-agwakọta igwe abụọ nke excavator na loader. Ọ nwere ọrụ niile nke excavator na loader. Otu igwe nwere ọtụtụ ọrụ, adaba na mgbanwe, ma belata nzụta ego na ojiji nke igwe niile. Nhọrọ Deutz, Cummins na ndị ọzọ a ma ama na engines na Italian Carraro nnyefe usoro. Ọ nwere ike na a kwadebere n'ụzọ dị iche iche inyeaka engineering ngwaọrụ dị ka emebi, ala arịlịka malite ịgba, vibration rammer, wdg Ngwaahịa a bụ w ...